स्कुलका बालबालिकालाई शौच गर्न जंगलमा ! - Meronews
स्कुलका बालबालिकालाई शौच गर्न जंगलमा !
जितेन्द्र थापा २०७८ पुष ३० गते १८:०५
सोही विद्यालयमा बराहताल इखेनीकी ६ वर्षीया हस्तना विक जनजागरण प्राथमिक विद्यालय कक्षा १ मा पढ्छिन् । उनको साथमा नत झोला छ, नत न्यानो कपडा नै थिए । चिसोले कापिरहेकी थिइन् ।
जनजागरण प्राथमिक विद्यालयमा कक्षा ५ सम्म पढाइ हुन्छ । त्यसपछि थप अध्ययनको लागि चेपाङ पुग्छन् । कक्षा ५ सम्म अध्ययन हुने गरे पनि शिक्षक अपुगका कारण पठनपाठनमा समस्या भएको विद्यालयका शिक्षक रमेश नामजाली बताउँछन् ।
२०६५ सालमा स्थापना भएको जनजागरण प्राविमा दुई जना शिक्षकको दरबन्दी छ । एक पद रिक्त रहेको छ । स्थानीय शिक्षक राख्न विद्यालयसँग स्रोत छैन ।
विद्यालयमा हाल एक जना दरबन्दी, एक जना स्थानीय स्रोत, एक जना राहत, एक जना करारसहित पाँच जना मात्र शिक्षक छन् । विद्यालयमा शिक्षक अपुग मात्र नभएर खानेपानी र शौचालयसम्मको अभाव छ ।
विद्यालयको स्रोतबाट विद्यालयमा शिक्षकसम्म छैनन्,’उनले भने, ‘बेन्ज डेस्क किनेर कसरी राख्नु । हाम्रा नेताज्युका कानमा कोले सुनाइदेला ‘तपाईलाई हेलिकप्टरबाट झर्दा रातो कार्पेट चाहिन्छ, यता देशको भविष्य पढ्नेबेला ओछ्उने कार्पेट नपाएर चिसो ठाउँमा बसेर पढ्छन् ।’ (न्युज कारखाना)